कोरोना भाइरसबारे संसारभरि नमेटिएका केही जिज्ञासा र तथ्यगत कुरा – Health Post Nepal
२०७६ चैत १७ गते १५:०७
विश्वभरिबाट करिब ५० हजार मानिसहरूले सिएनएनलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू सोधेका थिए। जसमध्ये केही मुख्य प्रश्नहरूको जवाफ यस अमेरिकी समाचार संस्थाले दिएको छ। सोहीमध्ये हामीले नेपालको परिवेश सुहाउँदो केही प्रश्न तथा जवाफहरूलाई हाम्रा पाठकसामु प्रस्तुत गरेका छौं।
कोरोना भाइरस संक्रमित कति प्रतिशत मानिसलाई सोको लक्षण देखिएको छैन? के यस्ता मानिसहरूबाट अरूलाई संक्रमण हुनसक्छ?
‘साइन्स’ जर्नलमा छापिएको एक अनुसन्धानअनुसार चीनमा पाँच जना कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये चार जनालाई त्यस्ता व्यक्तिबाट रोगको सञ्चार भएको थियो, जसलाई आफू कोरोना संक्रमित छु भन्ने नै थाहा थिएन।
‘यस घटनाले कोरोना भाइरसको भौगोलिक विस्तार द्रूत हुने र यसको नियन्त्रण गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहने देखाएको छ,’ अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन्।
न्यूजर्सीका प्राथमिक स्याहार चिकित्सक डाक्टर एलेक्स सालेर्नोले अमेरिकामा यतिबेला बाहिर हिँडिरहेका तीन जनामध्ये संक्रमण भएर पनि लक्षण नदेखिएको एक जना व्यक्ति हुनसक्ने बताए। उनले सामाजिक दूरी तथा बारम्बारको हात सफाइका अलावा पनि लक्षण नदेखिएका मानिसहरूको थप परीक्षणको आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्।
‘हामीले परीक्षण गरेर भेटिएका ‘पोजिटिभ केश’हरूलाई ‘नेगेटिभ केश’हरूसँग अलग्याएका छौं। तथापि, लक्षण नदेखिएका मानिसहरूको पनि परीक्षण गर्न सकेमा हामीले मानिसहरूलाई छिट्टै नै सामान्य जीवन तथा काममा फर्काउन सक्छौं,’ उनले भनेका छन्।
तर दुर्भाग्य, सालेर्नोका अनुसार अमेरिकामा परीक्षण किटको अभाव, बिग्रिएको किट तथा परीक्षणमा ढिलाई लगायतको कारण परीक्षण गराउन इच्छुक सबै मानिसहरूको सहज परीक्षण हुन सकिरहेको छैन।
त्यसो त फ्लूले झन् धेरै मानिसको ज्यान लिइरहेको छ भने हामी किन कोरोना भाइरसबारे चिन्तित हुने?
मृतक संख्याको आधारमा फ्लूभन्दा कोरोना भाइरस कमजोर देखिए तापनि यस कोभिड–१९ विभिन्न कारणहरूले गर्दा झन् खतरनाक छ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरसको पहिलो केश जनावरी महिनामा पहिचान भएको थियो भने यस रोगको कारण बिरामीको पहिलो मृत्यु फेब्रुअरी महिनाको अन्ततिर प्रमाणित भएको हो। तर, मार्च २६ सम्म आइपुग्दा यस राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको ७८ हजारभन्दा बढी बिरामीहरूको पहिचान भइसकेको छ भने यसका कारण ज्यान गुमाउने संख्या कम्तीमा ११ सय ३५ जना पुगिसकेको छ।
अर्कोतर्फ गत वर्षको अक्टोबर १ देखि अमेरिकामा फ्लूको मौसम सुरू भएयता यसको कारण २३ हजार भन्दा बढी नागरिकहरूको मृत्यु भैसकेको छ। देशभरि अक्टोबरदेखि मार्चको मध्यसम्म कम्तीमा तीन करोड ४० लाख फ्लू संक्रमिक देखिएका छन्।
तल उल्लेखित निम्न तथ्यहरूले फ्लूभन्दा कोरोना भाइरस अझ खतरनाक भएको पुष्टि गर्छ:
– फ्लूभन्दा कारोना भाइरसको संक्रमणको दर दोब्बर बढी छ। सिएनएनका स्वास्थ्य संवाददाता डाक्टर सञ्जय गुप्ताका अनुसार फ्लूले औसतमा १.२८ व्यक्तिलाई संक्रमित गराउँछ तर कोरोना भाइरसले दुईदेखि तीन जनासम्मलाई संक्रमित गराउने सम्भावना राख्दछ।
– उमेरले ८० कटेका र विभिन्न दीर्घरोग भएका मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको ‘मृत्युदर निकै उच्च’ छ जनामा एक रहेको छ।
– कोरोना भाइरस प्रभावितमा करिब १४ दिनसम्म कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ भने कसैमा त कुनै पनि लक्षण नै नदेखिन सक्छ। तर, लक्षण नदेखिएको अवस्थामा पनि भाइरस प्रभावितले अरूलाई थाहै नपाई संक्रमित गराउने जोखिम उच्च रहन्छ।
– फ्लूको लागि भ्याक्सिन उपलब्ध छ तर कोरोना भाइरसको उपचारका लागि हालसम्म कुनै पनि भ्याक्सिन वा औषधीको विकास भएको छैन।
विज्ञहरूका अनुसार फ्लूको भ्याक्सिन दिएर यसबाट हुने मृत्युलाई अत्याधिक रुपमा कम गर्न सकिन्छ। तर, कोरोना भाइरसको सवालमा यस्तो सम्भावना शून्य छ।
सम्भवत: हुँदैन। अप्रिल १२ मा पर्ने इष्टर पर्वको अवसरमा चर्चको प्रार्थना कक्ष मानिसहरूले भरिने राष्ट्रपति ट्रम्पले आशा गरे तापनि एक प्रमुख महामारीविज्ञ तथा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी)का सल्लाहकारले भने सो समयमा कोरोना भाइरसको कारण अमेरिकामा मृत्यु हुने मानिसको संख्या चुलिने प्रक्ष्येपण गरेका छन्।
सामाजिक दूरीको अन्त्य कहिले हुन्छ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेझैं अप्रिलको दोस्रो सातादेखि आमजीवन सामान्य र सहज बन्नसक्छ?
अर्कातिर, कैयौं चिकित्सकहरूले सामाजिक दूरीको व्यवस्था कायम राहिरहने र रहिरहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
के कोरोना भाइरस पानी (स्विमिङ पुल वा वाथ टव लगायत)मार्फत सर्छ?
प्राय: सबै जिमखानाहरू बन्द हुँदा त्यसका सदस्यहरू पानीमा डुबुल्की मार्दा पो सुरक्षित छ कि भनेर सोचिरहेका छन्।
‘स्विमिङ पुल वा बाथ टबको प्रयोग गर्दा पानीमार्फत कोभिड–१९ सरेको हालसम्म कुनै ठोस प्रमाण छैन,’ सिडिसीले भनेको छ, ‘तर पनि सुरक्षाको लागि उपयुक्त ढंगले सञ्चालन गरी मर्मतसम्भार तथा क्लोरिन वा ब्रोमिनजस्ता रसायनको प्रयोग गरी पानीमा भएको कीटाणुलाई मार्न सकिन्छ भने कोभिड–१९ संक्रमण गराउन सक्ने भाइरसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। कोभिड–१९ श्वासप्रश्वासबाट सर्ने हुँदा अहिलेको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुझाव दिएझैं अन्य मानिसहरूसँग कम्तीमा छ फिटको दूरी कायम गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।
के कोरोना भाइरस न्यून वा उच्च तापक्रममा मर्छ?
सामान्यतया चिसो मौसम वा सुख्खा वातावरणमा भन्दा उच्च तापक्रम तथा उच्च आद्रतामा कोरोना भाइरसहरू छिटो मर्छन्। ‘तथापि, कोभिड–१९ को तापक्रमसँगको सम्बन्धबारे भने हामीसँग धेरै जानकारी छैन,’ सिडिसीले भनेको छ, ‘यसका साथै भाइरस मर्नका लागि आवश्यक तापक्रम सतहको सामग्री, वातावरण तथा अन्य विविध पक्ष तथा तत्वहरूमाथि निर्भर गर्दछ।’
राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्मी मौसमको न्यानोले कोरोना भाइरस कमजोर हुने जनाए तापनि वैज्ञानिकहरूले त्यस्तो अनुमान गर्न अहिले नै निकै चाँडो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
के लामखुट्टेले कोरोना भाइरस सार्न सक्छ?
सक्दैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएअनुसार लामखुट्टेद्वारा कोरोना भाइरस सरेको अहिलेसम्म कुनै ठोस उदाहरण वा प्रमाण छैन। ‘यो नयाँ कोरोना भाइरस श्वासप्रश्वासजन्य भाइरस भएको हुँदा संक्रमित व्यक्तिले हाछिउँ गर्दा वा खोक्दो उसको मुख वा नाकबाट निस्कने सिँगान, थुक वा र्यादलको थोपा वा कणबाट अरु मानिसमा सर्छ।
हामीले कहिलेसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ला?
सम्भवत: धेरै महिनासम्म। तर, यो प्रकोप एकपल्ट सकिएर फेरि पनि देखा पर्न सक्ने हुनाले भविष्यमा पनि पटक-पटक सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बेलायतको इम्पेरियल कलेजले गरेको एक अनुसन्धानअनुसार हामीले करिब पाँच महिनासम्म कडा रुपमा सामाजिक दूरीको पालना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिलेलाई के बुझ्न जरुरी छ भने कम्तीमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको विकास नहुँदासम्म सामाजिक दूरी नै यस रोगलाई नियन्त्रणमा लिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।
कोरोना भाइरस सतहमा कति अवधिसम्म जीवित रहन्छ?
युएस नेशनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थको लगानीमा सञ्चालित एक अध्ययनअनुसार सतहको प्रकृति हेरिकन कोरोना भाइरस कम्तीमा तीन दिनसम्म जीवित रहन सक्छ।
विभिन्न रोग वा स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल वा दन्त चिकित्सकको मा जानु कतिको सुरक्षित छ?
साँच्चिकै आकस्मिक अवस्थाबाहेक अस्पताल, दन्त चिकित्सक वा अन्य कुनै स्वास्थ केन्द्रमा नजानु नै बुद्धिमानी हुनसक्छ।
यदि लक्षण नदेखिएका मानिसले पनि अरुमा संक्रमण फैलाउन सक्छन् भने म को संक्रमित छ र को छैन भनेर कसरी पहिचान गर्नसक्छु?
‘सक्नुहुन्न,’ जर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटी हस्पिटलका डिजास्टर एण्ड अप्रेसनल मेडिसिन प्रमुख डाक्टर जेम्स फिलिप्स् भन्छन्।
हालसम्मको लागि हामीले सबै मानिस कोरोना भाइरस संक्रमित छन् र सबैले हामी कोरोना भाइरस संक्रमित छौं भनेर व्यवहार गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो। यहाँ ‘व्यवहार’ भन्नाले एक-अर्कासँग तोकिएको दूरी अथवा सामाजिक दूरी कायम गरौं भन्ने नै हो।
तसर्थ, भिडभाडमा नजाने, मानिसहरूभन्दा कम्तीमा छ फिट पर रहने, अनुहारमा हातले नछुने वा हातको सरसफाई तथा स्वच्छता कायम गर्ने लगायत गर्नुपर्दछ।
यदि यस्तो हो भने मैले रोगीको स्याहार कसरी गर्ने त?
संसारभरि कोरोना भाइरस परीक्षण किटको संकट भइरहेको हालको अवस्थामा तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्या तथा आफन्तहरूलाई लागेको रोग कोभिड–१९ हो वा अरु नै केही हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्न। तसर्थ, अलग्गै एवम् सुरक्षित रहेर आफू र आफन्तलाई यस रोगबाट जोगाउनुभन्दा अन्य केही विकल्प छैन।
तथापि, माथिको प्रश्नको सवालमा सिडिसीले केही सुझावहरु दिएको छ, जुन तल उल्लेखित छन्:
– रोगको शंका लागेका व्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिदिने। ढोका बन्द गरेर राख्ने।
– स्याहारकर्ताको रुपमा एक जना मात्र मानिसको प्रबन्ध मिलाउने।
– बिरामी व्यक्तिलाई मास्क लगाउन लगाउने। यदि मास्कको कारण सास फेर्न गाह्रो भएको अवस्थामा स्याहारकर्ताले मास्क प्रयोग गर्ने।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यदि तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ भने मास्क प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हो।
यस रोगको लक्षणहरु के–के हुन्?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वास छोटो हुने र सास फेर्न अप्ठेरो हुने लगायत कोरोना भाइरस संक्रमणका संकेतहरू हुन्।
यो भन्दा गम्भीर अवस्थामा निमोनिया हुने, श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा गम्भीर समस्या आउने, मिर्गौलाले काम गर्न नसक्ने र मृत्युसम्म हुनसक्ने हुन्छ।
कोरोना भाइरसले शरीरमा संक्रमण गरेपश्चात सोका लक्षणहरू कति समयभित्र देखापर्छन् भन्नेमा अझै दुविधा रहेको छ। तथापि, केही
स्रोतहरूले यसको लक्षण देखिन १० देखि १४ दिनको समय लाग्ने जनाएका छन्।
यो रोग कसरी फैलन्छ?
सामान्यतया संक्रमण भएको एक व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिमा कोभिड–१९ सर्दछ। यस भाइरस लागेको व्यक्तिले खोक्दा, हाछिउँ गर्दा वा सास फाल्दा नाक वा मुखबाट सिँगान, थुक वा र्याबलको छिटा बाहिर निस्कन्छ। यस्तो तरल पदार्थ केही वस्तु वा मानिस वरपरको सतहमा गएर बस्छ। जब यस्ता वस्तु वा सतहलाई छोएर सोही हातले आँखा, नाक वा मुखलाई छुँदा यस भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सञ्चारित हुन्छ।
भाइरस लागेको व्यक्तिले खोक्दा वा सास फाल्दा नाक वा मुखबाट निस्केको तरल पदार्थको छिटा वायुमण्डलमा मिसिन्छ र सोही बेला सास फेर्दा संक्रमित तरल पदार्थको छिटा शरीरभित्र प्रवेश गर्दा पनि कोभिड–१९ को संक्रमण हुन्छ।
कोरोना संक्रमित भएर लक्षण नदेखिएको मानिसले यदि हाछिउँ गरेको छैन तथा खोकेको पनि छैन भने पनि अरूलाई रोग सर्न सक्छ?
‘लक्षण नदेखिएको मानिसले झन् सजिलै अरुलाई कोरोना भाइरस सार्न सक्दछन्,’ इपिडिमोलाजी प्रद्यापक एनि रिमोन भन्छिन्।
उनका अनुसार लक्षण नदेखिए पनि प्रभावित व्यक्तिले बोल्दा मुखबाट थुकको छिटा निस्कने र सोही छिटा अन्य व्यक्तिको मुख, नाक वा आँखामा पर्ने वा विभिन्न सतहमा पर्दा निरोगी व्यक्तिले त्यस्तो सतहमा छोई आफ्नो आँखा, नाक वा मुखमा छुँदा भइरस संक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ।
खानामार्फत कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ?
सिडिसीका अनुसार हालसम्म खानामार्फत यस भाइरस सरेको कुनै ठोस प्रमाण वा उदाहरण छैन। आजसम्मको निष्कर्षको आधारमा कोभिड–१९ श्वासजन्य तरल पदार्थको छिटा (र्याोल, सिँगान वा थुकको)मार्फत एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सञ्चारित हुन्छ।
कोरोना भाइरस मानिसको छालाबाट शरीरमा प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना छ कि छैन?
सिडिसीका अनुसार भाइरस भएको सतह वा वस्तुलाई हातले स्पर्श गरी सोही हातले नाक, मुख वा आँखामा छुँदा सो मानिसमा भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना रहे तापनि कोभिड–१९ सर्ने यो प्राथमिक माध्यम भने हैन। बरू, यो त मुख्यगरी श्वासजन्य तरल पदार्थको छिटा (र्यााल, सिँगान वा थुक) अर्को व्यक्तिको मुख वा नाकमा पर्दा सोही तत्व सासमार्फत फोक्सोमा प्रवेश भएपश्चात कोभिड–१९ रोगको सिकार हुने गर्छन्।
भाइरस प्रभावित व्यक्तिको दिसाबाट कोभिड–१९ सर्ने सम्भावना निकै न्यून छ। त्यसो त सुरूआती अनुसन्धानले संक्रमित व्यक्तिको दिसामा कोरोना भाइरस पाइन सक्ने देखाए तापनि दिसाको माध्यमबाट अन्य व्यक्तिमा सर्ने यस भाइरसको चरित्र भने हैन।
कोरोना भाइरस प्रभावित व्यक्तिले कति समयसम्म अन्यलाई संक्रमित गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ?
यस्तो समय फरक–फरक हुन सक्दछ। अझ विशेषगरी कोरोना भाइरस प्रभावित व्यक्ति कति अवधिसम्म स्वत: अलग्गिएर (सेल्फ आइसोलेसन)मा बस्छन् भन्ने कुरामा उनले कति समयसम्म अरूलाई संक्रमित गराउन सक्छन् भन्ने निर्भर गर्दछ।
तसर्थ, भाइरस प्रभावित व्यक्ति कहिलेसम्म स्वत: अलग्गिएर बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिडिसीले एक निर्देशिक सार्वजनिक गरेको छ:
– ज्वरो नियन्त्रण गर्ने औषधीको प्रयोग विना ज्वरो पूरै निको नहुँदासम्म,
– खोकी लगायत अन्य लक्षणहरू पूरै नियन्त्रण नहुँदासम्म,
– २४ घण्टाभन्दा बढी समयमा गरिएको कम्तीमा दुई पटकको भाइरस परीक्षणमा दुबै पटक नेगेटिभ परिणाम नआउँदासम्म
कोरोना भाइरस प्रभावित व्यक्ति सेल्फ आइसोलेसनबाट निस्कन मिल्दैन।
के कोभिड–१९ मानिसको दिसाबाट पनि सर्न सक्छ?
भाइरस प्रभावित व्यक्तिको दिसाबाट कोभिड–१९ सर्ने सम्भावना निकै न्यून छ। त्यसो त सुरूआती अनुसन्धानले संक्रमित व्यक्तिको दिसामा कोरोना भाइरस पाइन सक्ने देखाए तापनि दिसाको माध्यमबाट अन्य व्यक्तिमा सर्ने यस भाइरसको चरित्र भने हैन। यो एक जोखिम भएको कारण शौचालयको प्रयोगपछि र खाना खानुअघि नियमित रुपमा हात धुन अत्यावश्यक छ। कोभिड–१९ सर्ने माध्यम र तरिकाहरूको सम्बन्धमा चलिरहेका अनुसन्धानहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले हासिल गरिरहेकाले अद्यावधिक तथ्य एवम् जानकारीलाई भविष्यमा निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइने छ।
मैले आफैंलाई सुरक्षित राख्न मास्क प्रयोग गर्न जरुरी छ?
यदि तपाईं कोभिड-१० को लक्षणहरू (विशेषगरी खोकी लाग्ने) देखिएर बिरामी पर्नुभएको छ अथवा यस रोग लागेको सम्भावना भएको मानिसको रेखदेखमा आवद्ध हुनुहुन्छ भने मात्रै मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डिस्पोजेबल मास्क प्रयोग एक पटक मात्र गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं आफैं बिरामी हुनुहुन्न वा बिरामीको हेरचाहमा लाग्नुभएको छैन तर पनि मास्क प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने सम्झनुहोस् कि तपाईंले मास्कलाई खेर फालिरहनु भएको छ। हाल विश्वव्यापी रूपमा मास्क अभाव छ। तसर्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मास्क प्रयोग सोचविचारपूर्वक गर्न सुझाव दिएको छ।
के मलाई फ्लू र कोरोना भाइरस एकै पटक हुनसक्छ?
यस्तो हुन सम्भव छ। वास्तवमा फ्लू र कोरोना भाइरसको लक्षणहरू जस्तै: ज्वरो र खोकीलगायत उस्तै हुन्छन्। तर, फ्लू र कोरोना भाइरसबीच फरक छुट्याउन सकिने सबैभन्दा भरपर्दो लक्षण भनेको सास फेर्न कठिनाइ हो। जुन कोरोना भाइरस प्रभावितमा मात्रै हुन्छ।
(सिएनएनले तयार गरेको सामग्रीको नेपालको परिवेश सुहाउँदो भावानुवाद)